Naya Post Nepal | कमल थापासँगको निकटता ओलीलाई निकै महङ्गो पर्ने संकेत, झापाबाट बाहिरियो यस्तो खबर !
कमल थापासँगको निकटता ओलीलाई निकै महङ्गो पर्ने संकेत, झापाबाट बाहिरियो यस्तो खबर !
काठमाडौं । राप्रपालाई छाडेर नयाँ पार्टी खोलेका कमल थापासँगको निकटताले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गम्भीर धक्का लागेको छ । कमल थापा र केपी ओलीको निकटताको सोझो असर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै गृहनगर दमक नगरपालिकाको चुनावमा पर्ने देखिएको हो ।
दमकमा राप्रपाले शनिबार शक्ति प्रदर्शनसहित राम थापालाई मेयरको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । थापालाई नेपाली काँग्रेसले समेत सघाउने वचन दिएका कारण एमालेमाथि चर्को दबावमा पर्ने देखिएको छ । ०७४ को संघीय चुनाबमा यहाँबाट राप्रपाले केपी ओलीलाई सघाएको थियो । यसपटक राप्रपाले मेयरमा आफूलाई सहयोग गर्न माग गरेको थियो ।
तर, ओलीले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपासँगको सहकार्यलाई भन्दा कमल थापासँगको सहकार्य अगाडि बढाएपछि दमकको चुनावमा एमाले र राप्रपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आएको हो । ०७४ को चुनावमा एमालेका रोमनाथ ओलीले मेयरमा जित्दै गर्दा राप्रपाका राम थापा दोस्रो स्थानमा थिए । यसपटक थापा काँग्रेस र माओवादीको समेत साथ लिएर मेयर बन्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
२०७८ चैत्र २८, सोमबार प्रकाशित0Minutes 346 Views